Pirezidaanti Lammaa Magarsaa, biyyatti deebi’uun har’a tuuta Embassii biyya Neezarlaandii Itoophiyaa jiruu simatanii jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPirezidaanti Lammaa Magarsaa, biyyatti deebi’uun har’a tuuta Embassii biyya Neezarlaandii Itoophiyaa jiruu simatanii jiru.
Karoora fuula duraa irratti mari’ataniiru jedha odeeffannoon fb Embaasii Nezarlaandii Itoophiyaa maxxanse.
Alaamuddiin kotorbaandistii guddicha, akka Sa’uudiitti seera jala nuuf oolchaa!
Alaamuddiin Sa’udiin kan hiiteef miidhaan nyaataa isinii galcha jechuun doolaara bilyoona 4 qabdii irra fudhatee bubbule jedhan. Innis ruuza bareedaa Itoophiyaa keessatti oomishe ummata Sa’uudii akka sooruufi. Dubbiin akka inni yaade ta’uu diddee xaxaan wahii itti uumamee waadaa seene hanqate. Malaammaltummaan himatanii hidhan. Amma biyyi Sa’uudii qabeenya isaarraa %70 akka kennu gaafatte. Amma gara ji’a 6 gahee jira mana hidhaa Saudi erga seene.
Forbe irratti tarree dureeyyotaa keessa kan ture amma haqamee jira. Sababnis qabeenyi inni qabu hin beekamu jechuun.
Namni kun doolaara milyoonaan dhangalaasee Biyoonsee biyya Itoophiyaa akka fide ni yaadatama. Garuu ummata keenya buqqa’eef sumunii takka osoo hin kennin hafe. Cheekii maallaqa hin qabne Oromiyaatti kenne. Kunis tuffii inni naannoo Oromiyaatiif qabu ibsa.
Haa ta’uu garuu, namtichi kun qabeenya Oromiyaa xuuxee fixe. Akka gabaasa Midroc kan bara 2014’tti, warqii Shaakkiso keessaa bafate qofarraa doolaara bilyoona 17 ol argate. Qabeenya isaatiif malee lubbuu naannoo san jiruuf dhimma hin qabu; kanumaaf keemikaala biyyoota biraa keessatti dhoorgamu kan akka ‘cyanide’ warqii baasuuf itti dhimma baha. Bu’aa miti miidhaa guddaa ummata keenyarraan gahe. Kanaaf itti gaafatamuu qaba.
Gareen jijjiiramaa saamtota balleesina jettanii mitii? Alaamuddii Oromiyaatti akka hin deebine. Qabeenya saamichaan dhufe beenyaa ummata miidhamee ta’uutu karaa sirriiti.
Via Embassy of the Netherlands in Ethiopia
“Oromia president Lemma Megersa received an embassy team today to touch base and make plans for the future. FLTR: agricultural counselor Niek Bosmans, deputy head of mission Martin Koper, president Lemma and ambassador Bengt.”